Ngwaọrụ, akàrà, asambodo ngwaahịa na ihe ndị ọzọ
Ngwakọta ụlọ ọrụ gị dị ezigbo mkpa na azụmahịa gị ejikọtara. Idebe akwụkwọ nnabata gị mbụ ma ọ bụ nke enyere gị aka, yana akwụkwọ ndị ọzọ dị oke mkpa dị ka nkeji ọmụmụ ihe kwa afọ, mmezigharị, ihe ndekọ ego ụlọ akụ, asambodo ngwaahịa na ụdị IRS. Ngwa ụlọ ọrụ gị yana akwụkwọ ndekọ ahaziri ahaziri ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dị mkpa dị mkpa gbasara iwu na ego.
Mpempe ụlọ ọrụ anyị na-abata na ọnọdụ gbara ọchịchịrị mara mma aha ụlọ ọrụ gị nke ọla edo n'ọkpụkpụ azụ. Agụnyere bụ ikike ejiri aka ya na ụlọ ọrụ gị na aha ụlọ ọrụ gị, steeti na ụbọchị ịbanye na ya, akwụkwọ ụlọ ọrụ, ihe atụ nke iwu, nkeji ụlọ ọrụ, aha ndị isi oche, aha ndị nwe ụlọ, aha ndị ga - ekenye ndị ọzọ. Nkwekọrịta na ọtụtụ asambodo ngwaahịa ahaziri iche.
Iji tụọ ngwa erimeri, biko kpọọ ngalaba ọrụ ndị ahịa Mon-Fri n'etiti 7: 00AM na 5: 00PM Pacific Oge:
Ma ọ bụ ịnwere ike iji nrube ụdị anyị ebe a: Nye iwu ka ọ rụọ ọrụ na ngwa eji eme ihe
Madelọ ọrụ agbakorita ụlọ ọrụ jikọtara ọnụ bụ nke nwere vinyl abụọ nwere akara dị elu nke etinyere na kọmputa na-adịgide adịgide iji nye ọrụ ogologo oge yana ogologo ọ kachasị. Thedị kacha mma n'azụ agbadoro mgbanaka nwere akara atọ na mmeghe na imechi mmechi na-eme ka ibe edokwaa ala mgbe ọ bụla. A kọwapụtara ihe mgbochi ọ bụla na ọla edo ma dị na 5 agba: burgundy, green, blue, black and brown and in the 3 styles: Standard Pọtụfoliyo, Slim Standard na Standard (Ngwa zuru ezu na akara & Asambodo)
Kitakpo Slim Corporate Standard - $ 99
Ejiri ngwa ọrụ ndị a jikọtara ọnụ bụ nke vinyl nwere agba abụọ nwere ezigbo akpụ. Ha ma dikwa nwayọ karịa ngwa ọkọlọtọ. Igwe eji ejigide ụzọ atọ akpọchiri, nke nwere oghere na imechi ihe na-eme ka imee ka ibe dina ka ọ dị mma ma mee ka ha gbanwee ngwa ngwa. A kọwapụtara ihe mgbochi ọ bụla dị mma na ọla edo ma dị na 5 agba: ojii, agba aja aja, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na burgundy. (Ngwa zuru ezu na akara & Asambodo)
Pọtụfoliyo Standard ma ọ bụ LLC Kit - $ 99
Mmechi fụlawa Velcro ga-edebe akwụkwọ gị niile. Ejiri ngwa ndị a nwere vinyl etinyere na-arụ ọrụ dị elu. Qualityzọ nchekwa eji emegharị atọ nwere mgbago elu nwere oghere na imechi mmadụ na-enye ohere ibe edetu ala ma gbanwee n'ụzọ dị mfe. A kọwapụtara ihe mgbochi ọ bụla dị mma na ọla edo ma dị na 5 agba: ojii, agba aja aja, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na burgundy. (Ngwa zuru ezu na akara & Asambodo)
Linen Corporate ma ọ bụ LLC Kit - $ 119
A na-eji akwa dị mma nke a na-ejikwa akwa rụọ, nke na-eme ka ha pụọ ​​iche ma maa mma. A na-eji ihe dị arọ arụ ọrụ iji wuo ihe mgbochi ọ bụla na ndụ ogologo. Ihe omuma nke di nma zuru oke na edo edo di n’ile ndi 3: ojii, ojii na burgundy na ojii na isi awọ. Ngwongwo ihe oru ndi ozo (Kit zuru oke na akara ya na asambodo)
Docu-Box Corporate ma ọ bụ LLC Kit - $ 119
Ejiri akwa azụmahịa siri ike, chiri kọmpụta siri ike, ihe owuwu a pụrụ iche na-enye nchebe na-enweghị mkpa maka akpa dị iche. Igbe Docu nke ọ bụla dị na agba 2: ojii na burgundy. Ngwa zuru ezu na akara ya na asambodo)
Zippered Pọtụfoliyo Corporate ma ọ bụ LLC Kit - $ 130
Ngwa ndị ụlọ ọrụ zippered ndị a bụ nhọrọ mara mma maka ndị na-achọ ụdị ihe nrụnye. Ihe a na-egbute, mkpọchi mkpọchi na nkuku ígwè na-eme uwe ndị a dị oke nhọrọ. Edere aha nzukọ a na tebụl ọla kọpa chrome. (Kit zuru ezu na akara & Asambodo)
Blumberg Red Russia Akpụkpọ anụ Corporate & LLC Kit - $ 485
Gosiputa ihe okike gi n’aka ndi nwere ego, ndi na anoghi ego, ndi CPA na ndi oka iwu. Akpọrọ aha maka ọmarịcha akpụkpọ anụ Red Russia mara mma nke ejiri mee ya, mgbakwunye a dị arọ, akwụkwọ ndekọ aha ụlọ ọrụ dị elu bụ ngwa kacha mma ụlọ ọrụ nwere ike ịzụta. Mgbe ị nyere iwu, ị ga-ezipụta aha ụlọ ọrụ ịchọrọ na asambodo, akara na akara aka na ọla edo 24K na spain. Ọzọkwa, gosipụta steeti na afọ nke ahaziri ụlọ ọrụ ahụ. Ngwunye a na-abịa na ibe 20 zuru ezu, asambodo ọnụ ọgụgụ nwere akara peeji zuru ezu nke edepụtara na ụlọ ọrụ, steeti, aha mbinye aka na isi okwu. Can nwere ike ịtụ asambodo ndị ọzọ dị ka achọrọ. Maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ LLC. Na-abịa na nkeji ụlọ ọrụ ebipụtara na iwu iwu. (Kit zuru ezu na akara & Asambodo)